Budada Lithium orotate ee ugufiican (5266-20-6) Soo saaraha - Cofttek
Budada Lithium orotate (5266-20-6)
Cofttek waa soosaaraha ugu fiican ee Lithium orotate ee Shiinaha. Warshadeena waxay leedahay nidaam maareyn wax soo saar oo dhameystiran (ISO9001 & ISO14001), oo leh awood wax soo saar bille ah oo ah 2200kg.
Unugga: 1kg / bac, 25kg / Drum
Budada Lithium orotate (5266-20-6) video
Budada Lithium orotate Smamnuucista
Name: Lithium orotate
Qaaciddada Molecular: C5H3LIN2O4
Miisaanka kelli: 162.0297 g / mol
Dhibcaha Biyaha: ≥300 ° C
Magaca kiimikada: AMAAHDA CUDURKA CUDURKA OROTIC ACID
micne ah: lithium 2,6-dioxo-1,2,3,6-tetrahydropyrimidine-4-carboxylate; 4-Pyrimidinecarboxylic acid, 1,2,3,6-tetrahydro-2,6-dioxo-, cusbo lithium (1: 1)
Furaha gudaha: IZJGDPULXXNWJP-UHFFFAOYSA-M
Kala badh: N / A
Xalka: Dhibaatada DMSO, Methanol, Biyaha
Xaaladda Kaydinta: 0 - 4 C muddo gaaban (maalmo illaa toddobaadyo), ama -20 C muddo dheer (bilo)
Codsiga: Lithium orotate waa walax ka kooban lithium (bir macdanta alkali ah) iyo orotic acid (xarun si dabiici ah looga sameeyay jirka). Waxaa lagu heli karaa foomka kabista cuntada, lithium orotate waxaa loo qaataa inay tahay daaweyn dabiici ah oo loogu talagalay dhibaatooyin badan oo caafimaadka maskaxda ah.
Imaanshaha: budo White
orotate Lithium (5266-20-6) Spectrum NMR
Haddii aad u baahan tahay COA, MSDS, HNMR qayb kasta oo badeecad ah iyo macluumaad kale ah, fadlan la soo xiriir annaga maareeyaha suuq gaynta.
Waa maxay budada Lithium orotate (5266-20-6)?
lithium orotate waa kaabis lithium ah oo isku dhafan acid acid iyo lithium, waxtarna u leh fudaydka xanuunka laba-cirifoodka, waallida, niyad-jabka, walaaca, iyo caafimaadka maskaxda, iwm. waa inuu ku jiraa foomka milixdu ku jirto maadooyinka kale. Lithium orotate waa dhisme lithium caan ku ah dadka isticmaala kaabista. Horey waxaa suuqa ugu jiray cusbo badan oo lithium ah, sida lithium aspartate, lithium carbonate, iyo lithium chloride, iwm.
Lithium orotate (5266-20-6) dheefaha
Lithium orotate ayaa sidoo kale loo isticmaalay iyadoo lagu guuleysanayo yareynta xanuunka xanuunka dhanjafka iyo madax xanuunka maskaxda, tirinta unugyada dhiiga cad ee yar, cudurka qanjirada yar yar, aalkoholka iyo dhibaatooyinka beerka. Waxaa sidoo kale la soo sheegay in bukaannada qaba myopia (nabar-aragnimo) iyo glaucoma ay badanaa ka faa'iideystaan ​​saameynta fuuq-baxa ee yar yar ee lithium-ka indhaha, taasoo keenta horumar xagga aragtida ah iyo yareynta cadaadiska xididada dhiigga.
orotate Lithium (5266-20-6) Farsamooyinka Ficil?
Lithium orotate wuxuu sii daayaa dhalada lithium-ka Plasma iyo maskaxda aad bay u egtahay daawooyinka lithium kaarboon iyo citrate. Runtii tani waa si la mid ah habka loo qoro lithium-ka loo yaqaan lithium-ka, inkastoo aan lahayn wax sun ah. Lithium orotate waxay si wax ku ool ah wax uga qabataa bipolar aan la saadaalin karin iyada oo lagu kordhinayo qaadashada laba kiimiko oo xiise leh (dopamine iyo norepinephrine) oo loo dhigo synaptosomes. Synaptosomes waxaa lagu tuuraa dareemayaasha aan sii deyn karin hormoonnada jirka. Tani waxay ka caawin kartaa shakhsiyaadka inay isdajiyaan mar alla markii aysan run ahaan aheyn. Lithium ayaa joojineysa diritaanka calaamadaha 'D2 dopamine' ee maskaxda ku dhex yaal. Dopamine kacsan wuxuu dadka u horseedaa inay si ficil la'aan ah iyo marmar u dhaqmaan. Lithium orotate, citrate, carbonate ayaa sidoo kale joojisa enzyme glycogen synthase kinase 3 (GSK-3) taasoo muhiim u ah ficil celinta unugyada moodeellada badan ee calaamadda u leh. Adigoo kharibaya khariidadda D2 / GSK3 ee tilmaamaysa waddo-isku-dirirka adag ayaa yaraanaya.
orotate Lithium (5266-20-6) Codsiga
Lithium orotate waa walax ka kooban lithium (bir macdanta alkali ah) iyo orotic acid (xarun si dabiici ah looga sameeyay jirka). Waxaa lagu heli karaa foomka kabista cuntada, lithium orotate waxaa loo qaataa inay tahay daaweyn dabiici ah oo loogu talagalay dhibaatooyin badan oo caafimaadka maskaxda ah.
Lithium orotate budo for sale(Xagee laga iibsadaa budada Lithium orotate inta badan)
Shirkaddayadu waxay ku raaxeysataa xiriirro waqti dheer leh macaamiisheena maxaa yeelay waxaan diiradda saareynaa adeegga macaamiisha iyo bixinta alaabada waa weyn. Haddii aad xiiseyneyso badeecadeena, waxaan la qabsaneynaa qaabaynta amarrada ku habboon baahiyahaaga gaarka ah iyo waqtigeenna dhakhsaha ah ee hoggaanka amarada dammaanad-qaadista waxaad kuheli doontaa cuntadeena waqtigeeda waqtigeeda. Waxaan sidoo kale diirada saareynaa adeegyada qiimeynta ku jira. Waxaan diyaar u nahay su'aalaha adeegga iyo macluumaadka si aan u taageerno meheraddaada.
Waxaan nahay bixiye xirfadyahan ah Lithium orotate budada dhowr sano, waxaan siineynaa badeecado leh qiime tartan, iyo badeecaddeenu waa midda ugu tayada sareysa waxayna maraysa baaritaan adag, madax-bannaan si loo hubiyo inay aamin u tahay isticmaalka adduunka oo dhan.
Gong R, Wang P, Dworkin L. Waxa aan u baahan nahay inaan ka ogaano saameynta lithium kelyaha. Anigu waxaan ahay J Jilio Renal Physiol. 2016; 311 (6): F1168-F1171.27122541
Heim W, Oelschläger H, Kreuter J, Müller-Oerlinghausen B. Xoreynta lithium oo laga sii daayay sii deynteeda. Isbarbar dhigga toddobada nooc ee diiwaangashan. Farmashiyaha. 1994; 27 (1): 27-31.8159780
Kling MA, Manowitz P, Pollack IW. Isugeynta maskaxda iyo uruurada 'lithium lithium' ka dib cirbadaha ba'an ee kaarboon lithium kaarboon iyo orotate. J Farmasi Farmasi. 1978; 30 (6): 368-370.26768
Oleoylethanolamide (OEA) budada (111-58-0)
Budada Pterostilbene (537-42-8)
Pyrroloquinoline Quinone cusbooneysi cusbo (122628-50-6)
Budada PQQ (72909-34-3)
Cofttek waxaa laga helay 2008, waa shirkad tiknoolajiyad sare leh oo kaabaya cuntada si loogu daro wax soo saarka, R&D iyo iibka.
Kaabista Da'da ee ugu Fiican Nicotinamide Mononucleotide (NMN)
Magnesium L-Threonate Supplementon: Faa'iidooyinka, Qiyaasta, iyo Saamaynta Dhinacyada
Palmitoylethanolamide (PEA): Faa'iidooyinka, Qiyaasta, Isticmaalka, Kordhinta
Kordhinta ugu fiican ee Nootropic ee Alpha GPC sanadka 2021
Bogga ugu weyn Nagu saabsan blog Nala Xiriir Products
Afeef: Wax dalab ah kama samaynayno alaabooyinka lagu iibiyo degelkan. Ma jiro wax macluumaad ah oo laga bixiyay websaydhkan oo ay qiimeeyeen FDA ama MHRA. Macluumaad kasta oo lagu bixiyo websaydhkan waxaa loo bixiyaa sida ugu fiican ee aan ka ogaanno loomana jeedo in lagu beddelo talooyinka xirfadlayaal caafimaad oo takhasus leh. Shahaadooyin kasta ama dib u eegis wax soo saar ah oo ay bixiyaan macaamiisheenu ma ahan fikradaha cofttek.com waana inaan loo qaadan talo ahaan ama xaqiiqo ahaan Xuquuqda daabacaadda © COFTTEK Inc.